डा. केसीको घाँटीमा संक्रमण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
असार ३२, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
जुम्ला — १६ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको शनिबार रातिदेखि रक्तचाप, मुटुको गति र श्वासप्रश्वासमा उतारचढाव आएको छ । उनको घाँटीमा समेत संक्रमण बढ्दै गएको छ । संक्रमण बढ्दै जाँदा समेत उनले औषधि लिन मानेका छैनन् । उनको नसा सुन्निएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् ।
डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनशनस्थलमा इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टका लागि चाहिने सम्पूर्ण उपकरण र औषधि तयारी अवस्थामा राखिएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. पुजन रोकायाले बताए ।
‘शनिबारदेखि मुटुको गतिमा असामान्य परिवर्तन देखिएका कारण उपचारमा संलग्न चिकित्सकको सल्लाहअनुसार भेन्टिलेटर र डिफिब्रिलेटर अनशन स्थलमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘इमर्जेन्सी अवस्थामा चाहिने सबै किसिमका औषधि सिरिन्जमा लोड गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ तर डा. केसीले अडान नछाडेकाले समस्या भएको छ ।’
डा. केसीको घाँटी दुख्ने, खसखसाउने, खोकी लाग्ने र आवाजमा सामान्य परिवर्तन पनि भएको छ । आफू अनशनमा रहेका कारण कुनै पनि एन्टिबायोटिक्स प्रयोग नगर्ने अडान उनले लिएका छन् । उनले शनिबारदेखि कुनै पनि स्वास्थ्य जाँच गर्न मानेका छैनन् ।
प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०७:०७
फ्रान्सलाई विश्वकप उपाधि
असार ३१, २०७५ राजु घिसिङ
मस्को — स्टार खेलाडीले भरिएको फ्रान्सले सुस्त सुरुआत गरेर पनि विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । फ्रान्सले आइतबार लुजनिकी रंगशालामा भएको फाइनलमा क्रोएसियामाथि ४–२ को जित रच्दै दोस्रोपल्ट विश्वकप जितेको हो ।
यो विश्वकपमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरेका १९ वर्षीय फरवार्ड केलियन एमबाप्पे, एन्टोइन ग्रिजमन र पाउल पोग्बाको गोलसँगै फ्रान्स फेरि विश्वविजेता भएको हो । यसअघि उसले सन् १९९८ मा घरेलु भूमिमा भएको फाइनलमा ब्राजिललाई ३–० ले हराएर पहिलोपल्ट विश्वकप जितेको थियो । फान्सलाई २००६ को फाइनलमा भने इटालीले पेनाल्टी सुटआउटमा स्तब्ध पारेको थियो ।
डिडियर डेसच्याम्प २० वर्षअघि फ्रान्स च्याम्पियन हुँदा कप्तान थिए । अहिले उनी प्रशिक्षकका रूपमा च्याम्पियन भए । यसरी खेलाडी र प्रशिक्षकमा विश्वकप जित्ने उनी तेस्रो व्यक्ति हुन् । फरवार्ड ओलिभियर जिरुड सातौं खेलमा पनि गोलको खाता खोल्न असफल भए तर एमबाप्पे, ग्रिजमन र पोग्बाले क्रोएसियाली डिफेन्सलाई ध्वस्त पारिदिए । मिडफिल्डमा फेरि लुका मोड्रिच चम्किए तर उनी एक्लैले क्रोएसियालाई विश्वकप जित्ने नवौं टिम बनाउन सकेनन् ।
दुई दशकयताका दुईपल्ट विश्वकप जित्ने फ्रान्स पहिलो टिम हो । दोस्रोपल्ट च्याम्पियन भएपछि उसले उरुग्वे (१९३० र १९५०) र अर्जेन्टिना (१९७८ र १९८६) को उपलब्धि पनि बराबरी गर्‍यो । यसभन्दा बढी इटाली र जर्मनीले ४–४ तथा ब्राजिलले पाँचपल्ट विश्वकप जितेका छन् । क्रोएसिया भने फाइनल पुगेर पनि उपाधि नजित्ने पाँचौं टिम बन्यो । उसको हारसँगै सन् १९५८ यता हरेक २० वर्षमा नयाँ च्याम्पियन निस्कने क्रम पनि तोडियो ।
फ्रान्सले यो विश्वकपको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियालाई २–१ ले पराजित गर्न भिडियो असिसेन्ट रेफ्री (भार) को सहयोग लिनुपरेको थियो । र, समूहको अन्तिम खेलमा डेनमार्कविरुद्ध पनि निरश फुटबल खेलेको थियो । तर, नकआउट प्रवेशसँगै उसले लय समात्यो । अन्तिम १६ मा लियोनल मेसीको अर्जेन्टिनाविरुद्ध ४–३ को जितमा दुई गोल गर्दै एमबाप्पेले नयाँ सुपरस्टारका रूपमा उदाएको संकेत दिए । त्यसपछि फ्रान्सले क्वाटरफाइनलमा अर्को दक्षिण अमेरिकी टिम उरुग्वेलाई हराएको थियो । उसले सेमिफाइनलमा स्टार खेलाडीको वर्चस्व रहेको बेल्जियमलाई पराजित गर्न पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपरेको थिएन ।
कुल ४० करोड अमेरिकी डलर पुस्कारको विश्वकपमा फ्रान्सले तीन करोड ८० लाख हात पार्‍यो । उपविजेता क्रोएसियाको भागमा २ करोड ८० लाख डलर रह्यो । ३० टिम सहभागी एक महिने प्रतियोगितामा इंग्ल्यान्डलाई हराएर तेस्रो भएको बेल्जियमले २ करोड ४० लाख डलर पायो ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७५ २२:५७
भत्केको ओडारमा पाँच दिनपछि २ गोठालाको शव फेला, ४ भेंडा जीवितै
डा. केसीसँग संवाद सुरु गर्न प्रा. सुवेदीको आग्रह
एसएसपीसहित चार जना भ्रष्टाचारी ठहर
थप दुई न्यायाधीश माथि छानबिन
डा. केसीलाई सरकारको सुझाव, ‘माग पूरा भएको खुशियाली मनाउनुस्’
दुई राप्रपाबीच शुक्रबार एकता
अपडेटः बुधबार, २४ असार, २०७७ । १७ : १० बजे